Kufuneka Ubhaptizwe Ukuze Ube NgumKristu | Efundwayo
Kufuneka Ubhaptizwe Ukuze Ube NgumKristu
Bazali, Ncedani Abantwana Benu Babhaptizwe
QUESTIONS FROM READERS Imibuzo Evela Kubafundi
Ukubuka Iindwendwe Yinto Entle, Efunekayo!
IBALI LOBOMI UYehova Akazange Andiphoxe!
Ukuqeqeshwa​—⁠Ubungqina Bokuba UThixo Uyasithanda
“Phulaphulani Ingqeqesho Nize Nilumke”
IMboniselo (Yokufundisa) | Matshi 2018
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseMozambic Intetho Yezandla YaseSalvadoran Intetho Yezandla YaseSlovakia Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla YaseZambia Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCosta Rica Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseGuatemala Intetho Yezandla yaseHonduras Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMalawi Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseMzantsi Afrika Intetho Yezandla yaseNicaragua Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseRomaniya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAlur IsiAmharic IsiAmis IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBassa (saseCameroon) IsiBelize Kriol IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitonga (SaseZimbabwe) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDamara IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEdo IsiEfik IsiEsan IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabiye IsiKabuverdianu IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMarshallese IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMixtec (saseGuerrero) IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSepulana IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiKurdish Kurmanji isiLow German isiZapotec (saseIsthmus)
“Ubhaptizo, [luyanisindisa] nani ngoku.”—1 PET. 3:21.
IINGOMA: 7, 56
SIFUNDA NTONI NGOBHAPTIZO KWEZI ZIBHALO?
1 Petros 3:20, 21
1, 2. (a) Baye bathini abanye abazali xa umntwana wabo ecela ukubhaptizwa? (b) Kutheni abantu abaza kubhaptizwa beye babuzwe ukuba sele bezinikele na kuYehova? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
ABAZALI bentombazana esiza kuyibiza ngokuba nguMaria, bajonge intombi yabo njengoko iphakama kunye nabanye abaza kubhaptizwa. Iphendula imibuzo emibini yesithethi ngelizwi elivakalayo. Emva koko, iyabhaptizwa.
2 Abazali bayo banebhongo ngayo kuba iye yagqiba ekubeni izinikele kuYehova ize ibhaptizwe. Kodwa ke, umama wayo ebekhe wayithandabuza le nto. Ebezibuza: ‘Akamncincanga kodwa lo mntwana ukuba abhaptizwe? Uyayazi phofu le nto ayenzayo? Akubhetelanga ukuba alinde abe ngathi uba mdadlana ngaphambi kokuba abhaptizwe?’ Abazali abaninzi baye bazibuze le mibuzo xa umntwana wabo ecela ukubhaptizwa. (INtshu. 5:5) Phofu ke bafanele kuba ukuzinikela kuYehova nokubhaptizwa zezona zinto zibalulekileyo umKristu aya kuze azenze.—Jonga ibhokisi ethi “ Ngaba Sele Uzinikele KuYehova?”
3, 4. (a) Ngowuphi umzekeliso awawenzayo umpostile uPetros obonisa indlela ekubaluleke ngayo ukubhaptizwa? (b) Kutheni efanisa ubhaptizo nokwakhiwa komkhombe nguNowa?
3 Umpostile uPetros wafanisa ubhaptizo nokwakhiwa komkhombe nguNowa, wathi: “Oku [kwakhiwa komkhombe] kufanekisela ubhaptizo, olunisindisayo nani ngoku.” (Funda eyoku-1 kaPetros 3:20, 21.) Umkhombe wawubonwa ngumntu wonke, ibe wawububungqina obucacileyo bokuba uNowa uzinikele ekwenzeni ukuthanda kukaThixo. UNowa wawenza kanye ngendlela uYehova afuna wenziwe ngayo umsebenzi awayemnike wona. Ukuze uNowa nentsapho yakhe basinde kuMkhukula kwafuneka benze izinto ezibonisa ngokucacileyo ukuba banokholo. Sifunda ntoni kulo mzekeliso?
4 Kanye njengokuba umkhombe wawububungqina bokuba uNowa unokholo, nokubhaptizwa phambi kwabantu bubungqina obucacileyo. Bantoni? Bokuba umKristu uzinikele kuYehova kuba enokholo kuYesu ovusiweyo. NjengoNowa, abantu abazinikele kuThixo baqhubeka bemthobela yaye besenza umsebenzi abawuthunywe nguye. UYehova wamsindisa uNowa, ibe uza kubasindisa abo babhaptiziweyo xa etshabalalisa eli hlabathi, ukuba abamshiyi. (Marko 13:10; ISityhi. 7:9, 10) Le nto ibonisa ukuba ukuzinikela kuYehova nokubhaptizwa kubalulekile. Umntu olibazisayo ukubhaptizwa usengozini yokungabufumani ubomi obungunaphakade.
5. Siza kufunda ngantoni kweli nqaku?
5 Ngoku siyazi indlela ekubaluleke ngayo ukuba sibhaptizwe, ngoko kufuneka sazi iimpendulo zale mibuzo mithathu. Ithini iBhayibhile ngobhaptizo? Ziintoni ekufuneka azenze umntu ngaphambi kokuba abhaptizwe? Kutheni umKristu ofundisa umntwana wakhe okanye omnye umntu kufuneka esoloko ecinga ngendlela ekubaluleke ngayo ukubhaptizwa?
ITHINI IBHAYIBHILE NGOBHAPTIZO?
6, 7. (a) Lwaluthetha ntoni ubhaptizo lukaYohane? (b) Loluphi olona bhaptizo lubalulekileyo uYohane awalwenzayo?
6 IBhayibhile ithetha okokuqala ngobhaptizo xa isixelela ngolo lwalusenziwa nguYohane. (Mat. 3:1-6) Abantu babebhaptizwa nguYohane ukuze babonise ukuba baguqukile kwizono ababezenza besaphula uMthetho KaMoses. Kodwa, olona bhaptizo lubalulekileyo uYohane awalwenzayo lwalungenanto yakwenza nakuguquka. UYohane waba nenyhweba yokubhaptiza uYesu, uNyana kaThixo ongenasono. (Mat. 3:13-17) Ngenxa yokuba wayengenasono, kwakungeyomfuneko ukuba aguquke. (1 Pet. 2:22) Ngokubhaptizwa wayebonisa ukuba uzinikela ekwenzeni ukuthanda kukaThixo.—Heb. 10:7.
7 Ngexesha uYesu awayeshumayela ngalo, nabafundi bakhe babebhaptiza abantu. (Yoh. 3:22; 4:1, 2) Nolu ubhaptizo lwalubonisa ukuba umntu uguqukile kwizono abezenza esaphula uMthetho KaMoses. Kodwa emva kokufa nokuvuswa kukaYesu, ubhaptizo lwaluza kuthetha into eyahluke mpela.
8. (a) UYesu wabayalela ukuba benze ntoni abalandeli bakhe emva kokuba evusiwe? (b) Chaza ukuba kutheni kubalulekile ukuba umKristu abhaptizwe.
8 Ngo-33 C.E., emva kokuba evusiwe uYesu, wathetha nabantu abangaphezu kwe-500, mhlawumbi kukho nabantwana. Inoba kungeli xesha apho wathi: “Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Kubonakala ngathi kwakukho abalandeli bakhe abaninzi xa wakhupha lo myalelo othi makwenziwe abafundi. Ngoko uYesu wayebonisa ukuba abo bafuna ukuthwala idyokhwe yakhe okanye ukuba ngabalandeli bakhe kufuneka babhaptizwe. (Mat. 11:29, 30) Nabanina owayefuna ukukhonza ngendlela efunwa nguThixo kwakuza kufuneka ayazi aze ayamkele indima uYesu anayo kwinjongo kaYehova. Kusemva koko apho wayenokubhaptizwa. Le kuphela kwendlela yokubhaptiza ngamanzi uThixo ayamkelayo. IBhayibhile inobungqina obuninzi obubonisa ukuba ngexesha labapostile, abafundi bakaKristu abatsha babeyiqonda indlela ekubaluleke ngayo ukuba babhaptizwe. Ibe babengalibazisi.—IZe. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33.
9, 10. Sifunda ntoni ngobhaptizo kumTiyopiya nakumpostile uPawulos?
9 Funda iZenzo 8:35, 36. Makhe sithethe ngomTiyopiya owaguqukela ebuYudeni owayesendleleni egodukayo, evela kukhonza eYerusalem. UFilipu wathunywa yingelosi kaYehova kulo mTiyopiya ukuba ‘avakalise iindaba ezilungileyo ezingoYesu.’ Wenza ntoni lo mTiyopiya? Into awayenzayo yabonisa ukuba wayeziqonda kakuhle izinto awazifundiswayo. Wayefuna ukwenza into uYehova afuna amaKristu ayenze, ngoko zange alibazise ukubhaptizwa.
10 Omnye umntu esiza kufunda ngaye, yindoda engumYuda eyayitshutshisa amaKristu. Wazalelwa kuhlanga olwaluzinikele kuThixo. Kodwa amaYuda ayengaselohlanga olukhethekileyo lukaYehova. Le ndoda yayizithanda izithethe zamaYuda, kodwa yabona ukuba kwakungamele kube njalo. Yashunyayezwa nguYesu ovusiweyo ngokwakhe. Yenza ntoni le ndoda? Yavuma ukuncedwa ngumfundi kaKristu, uAnaniyas. IBhayibhile ithi ngale ndoda: ‘Yasukuma yaza yabhaptizwa.’ (IZe. 9:17, 18; Gal. 1:14) Inoba sele uqonda ukuba le ndoda ingumYuda sithetha ngayo ngumpostile uPawulos. Kodwa ubonile phofu ukuba wathi akuqonda indima kaYesu kwinjongo kaThixo wenza into ngaloo nto? Zange alibazise, wabhaptizwa ngoko nangoko.—Funda iZenzo 22:12-16.
11. (a) Yintoni eyenza izifundo zeBhayibhile zifune ukubhaptizwa? (b) Uye uzive njani xa ubona abantu abazinikele kuYehova bebhaptizwa?
11 Nanamhlanje izifundo zeBhayibhile zenza into efanayo enoba lulutsha okanye ngabantu abadala. Zithi zakuba nokholo zize ziyiqonde kakuhle inyaniso, zifune ukuzinikela kuThixo zize zibhaptizwe. Intetho yobhaptizo ihlala iyeyona kuthethwa ngayo kuzo zonke iindibano zethu. AmaNgqina KaYehova ayavuya xa isifundo seBhayibhile siyamkela inyaniso size sibhaptizwe. Abazali abangamaKristu bavuya kakhulu xa abantwana babo bebhaptizwa. Ngonyaka wenkonzo ka-2017, bangaphezu kwe-284 000 abantu ‘abanotyekelo olufanelekileyo’ ababonise ukuba bazinikele kuYehova ngokuthi babhaptizwe. (IZe. 13:48) Le nto ibonisa ukuba bayaqonda ukuba umntu akanakuba ngumKristu de abhaptizwe. Ziintoni abaye bazenza ngaphambi kokuba babhaptizwe?
12. Ziintoni ekufuneka isifundo sizenze ngaphambi kokubhaptizwa?
12 Ngaphambi kokuba isifundo sibhaptizwe, kufuneka sibe nokholo ngenxa yokwazi inyani ngoThixo, injongo yakhe nento ayenzileyo ukuze asindise abantu. (1 Tim. 2:3-6) Olo kholo lunceda eso sifundo singenzi izinto ezingafunwayo nguYehova size sithobele imithetho yakhe. (IZe. 3:19) Umntu oqhubeka esenza izono ezinzulu ngexesha azinikela ngalo kuThixo, kuyafana nokuba akazinikelanga kuye. (1 Kor. 6:9, 10) Kodwa zikhona nezinye izinto ekufuneka sizenze ngaphandle kokuthobela imithetho kaYehova yokuziphatha kakuhle. Umntu ofuna ukuzinikela kuThixo kufuneka aye ezintlanganisweni, ashumayele aze aqhube nezifundo. UYesu wathi ngabantu abangabalandeli bakhe nyhani abaza kwenza lo msebenzi. (IZe. 1:8) Umthandazo owenziwa sisifundo sisodwa, sizinikela kuThixo, awusebenzi ukuba asizenzi ezi zinto sithethe ngazo. Kuxa sizenza, apho sinokubhaptizwa phambi kwabantu.
SINCEDE ISIFUNDO SIFUNE UKUBHAPTIZWA
Ngaba usoloko uyikhumbula indlela ekubaluleke ngayo ukubhaptizwa uze loo nto uyicacisele umntu omfundelayo? (Jonga isiqendu 13)
13. Kutheni umqhubi wesifundo kufuneka ahlale ekhumbula ukuba umntu akanakuba ngumKristu de abhaptizwe?
13 Xa unceda umntwana wakho okanye esinye isifundo ukuba senze ezi zinto sesithethe ngazo, khumbula ukuba ukuze abe ngumlandeli kaYesu nyhani kufuneka abhaptizwe. Ukuba uyayikhumbula loo nto uza kusichazela kakuhle isifundo sakho. Awuzukonqena ukusicacisela indlela ekubaluleke ngayo ukuba sibhaptizwe. Sifuna ukuba abantwana bethu nezinye izifundo esinazo zide zibhaptizwe!
14. Kutheni singanyanzeli mntu ukuba abhaptizwe?
14 Akukho mntu omele anyanzele omnye ukuba abhaptizwe, enoba ngumzali, ngumqhubi wesifundo okanye nguye nabanina ebandleni. UYehova akanyanzeli mntu. (1 Yoh. 4:8) Kunoko, xa sifundisa abantu kufuneka sibancede baqonde indlela ekubaluleke ngayo ukuba basondelelane noThixo. Ukubhaptizwa kwabo kuya kuxhomekeka kwindlela abayixabisa ngayo inyaniso nokuba bayafuna na ukuba ngabalandeli bakaKristu.—2 Kor. 5:14, 15.
15, 16. (a) Ngaba umntu kufuneka abe neminyaka ethile ukuze abhaptizwe? Cacisa. (b) Kutheni umntu kufuneka abhaptizwe ukuze abe liNgqina LikaYehova nokuba ebekhe wabhaptizwa kwenye icawa?
15 Asinakutsho ukuba umntu kufuneka abe ngakanani ngeminyaka ukuze abhaptizwe. Kaloku abantu abafani. Abaninzi babhaptizwa besebancinci kakhulu kodwa baqhubeke bemkhonza uYehova. Abanye abantu babhaptizwa sele bebadala kuba befumene inyaniso ebudaleni, mhlawumbi sele bedlulile nakwiminyaka eyi-100!
16 Elinye ixhegokazi labuza umntu owayelifundela ukuba ngaba kufuneka libhaptizwe, kuba lalisele libhaptiziwe kwezinye iicawa elalihamba kuzo. Bafunda izibhalo ezaziza kuliphendula. Layiqonda impendulo eseBhayibhileni laza lakhawuleza labhaptizwa emva koko. Nangona lalisondele kwiminyaka eyi-80, labona ukuba kufuneka libhaptiziwe. Kufuneka umntu akwazi kakuhle ukuthanda kukaYehova ngaphambi kokuba abhaptizwe. Yiloo nto umntu kufuneka abhaptizwe noba ebekhe wabhaptizwa kwenye icawa.—Funda iZenzo 19:3-5.
17. Kufuneka acinge ngantoni umntu ngosuku abhaptizwa ngalo?
17 Umntu umele avuye nyhani ngosuku abhaptizwa ngalo. Kodwa ikwalixesha lokucinga ngale nto aza kuyenza. Umntu kufuneka asebenze nzima ukuze ahlale ezinikele kuThixo. Yiloo nto uYesu wafanisa ukuba ngumfundi wakhe nokuthwala idyokhwe. Abafundi bakaYesu kufuneka “bangabi saziphilela, kodwa baphilele yena lowo wabafelayo waza wavuswa.”—2 Kor. 5:15; Mat. 16:24.
18. Yeyiphi imibuzo eza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo?
18 Umama kaMaria ebesithethe ngaye wayecinga ngale nto xa wayezibuza imibuzo esekuqaleni. Ukuba ungumzali, inoba uyazibuza: ‘Ngaba umntwana wam sele ekulungele ukubhaptizwa? Ngaba umazi nyhani uYehova kangangokuba angazinikela kuye ngendlela efanelekileyo? Ngaba kufuneka afunde aze aphangele ngaphambi kokuba abhaptizwe? Ndiza kuthini xa esenza isono esinzulu sele ebhaptiziwe?’ Inqaku elilandelayo liza kuphendula le mibuzo lize lincede abazali abangamaKristu balujonge ngendlela eyiyo ubhaptizo.
Ngaba Sele Uzinikele KuYehova?
Ngaphambi kokuba izifundo zibhaptizwe zize zibe ngamaNgqina KaYehova ziye zibuzwe imibuzo emibini phambi kwabantu. Owokuqala uthi, “Ngenxa yedini lentlawulelo likaYesu Kristu, uguqukile na kwizono obuzenza waza wazahlulela kuYehova ukuze wenze ukuthanda kwakhe?”
Sazi njani ukuba abo baza kubhaptizwa sele bezinikele kuYehova? Malunga nonyaka ngaphambi kokuba uYesu akhuphe umyalelo ‘wokwenziwa kwabafundi nokuba babhaptizwe,’ wachaza izinto ezaziza kufuneka kubalandeli bakhe. (Mat. 28:19, 20) Wathi kubapostile nakubafundi bakhe: “Ukuba nabani na ufuna ukundilandela, makazincame, athabathe isibonda sakhe sentuthumbo aze aqhubeke endilandela.—Mat. 16:24.
UYesu wayephilela ukwenza ukuthanda kukaYise. Ngenxa yoko, izifundo ezifuna ukugcina zonke izinto uYesu aziyalela zona zimele zizincame, zizinikele kuYehova ngokupheleleyo. NjengoYesu, ukwenza ukuthanda kukaYehova yeyona nto ibalulekileyo ebomini bazo. (Mat. 26:39) Xa ziza kubhaptizwa zingqina into yokuba zizincamile, zizimisele ukukhonza uThixo ngamandla azo onke, ngezinto nangobuchule ezinabo. (Roma 12:1) Ngenxa yezi zizathu, abo baza kubhaptizwa baye bacelwe ukuba bangqine ukuba bazinikele kuYehova ukuze benze ukuthanda kwakhe.
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Matshi 2018